.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: FlashSong လုပ်နည်း အပိုင်း(၁)
FlashSong လုပ်နည်း အပိုင်း(၁)
ဒီနေ့တော့ flashsong သီချင်းကိုယ်တိုင်လုပ်လိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
swissmax4software မရှိသေးရင် ဒီမှာ သွားဒေါင်းလိုက်ပါ။
software ကိုဖွင့်ပြီး ပုံထဲကအတိုင်း new ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် movie size သတ်မှတ်ရပါမယ်။ 800/460ကအဆင်ပြေဆုံးပါပဲ။ ပုံမှာ 480ဖြစ်နေပါတယ်။
နောက်ပြီးရင် သီချင်းထည့်ပါမယ်။သီချင်းမထည့်ခင်ထည့်မယ်သီချင်းကို အရင်
format factory software နဲ့ size သေးအောင်ချုံ့ပေးရပါမယ်။
ဒါမှ flashsong size လဲသေးမှာပါ။ သီချင်းချုံ့နည်းကတော့ ဒီနေရာ လေးမှာသွားဖတ်လိုက်ပါ။ ............................................................................................................
သီချင်းထည့်ရန်အတွက် import sound ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
format factory နဲ့ချုံ့ထားတဲ့သီချင်းကိုထည့်ပါ။
ပြီးရင် ပုံထည့်ရပါမယ်။ ပုံပါအတိုင်း import image ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပုံအရှင်လေးတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ import animation ကို နှိပ်ရပါမယ်။
flash သီချင်းတွေထဲမှာသုံးထားတဲ့ ပုံအရှင်လေးတွေကိုယူလဲရပါတယ်။
အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း ပုံအရှင်ရှိတဲ့ swf file ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
box လေးတက်လာရင် import ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
နောက်ရက်များကျမှပဲ သီချင်းစာသားထည့်နည်းကို ဆက်ရေးပေးပါတော့မယ်။
တစ်ခြားဆိုဒ်များမှာကူးယူဖော်ပြချင်တယ် ဆိုရင် ဒီ ဆိုဒ် ကို credit ပြန်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့လို့
Posted by FlashSongCrazy at 05:25